Tamenak’atody sy tantely : manatsara ny tarehy be menaka
Andairan’ny mony sady mora mangirana ny hoditra mitera-menaka na matavy. Noho ireo tavo mivoaka eo aminy no mitarika izany. Azo arindra anefa ny fivoahan’io tavy io, mba tsy ho simban’ny mony sy ny loto ny hodi-tava ary hikatona kokoa ny mason-koditra. Tamenak’atody sy tantely no vahaolana !
· Tamenak’atody 1
· Tantely 1 sotrokely
· Ranom-boasarimakirana 1 sotrokely
Fikarakarana sy fampiasana azy
Afangaro tsara ireo akora rehetra ireo. Ahosotra amin’ny tarehy efa voadio tsara izany avy eo ary avela hilona mandritra ny 20 minitra. Kobanina amin’ny rano matimaty ny tarehy avy eo.
Inona no tombony entin’ireto akora ireto ?
· Ny tamenak’atody dia manamandina ny hodi-tava. Ilaina izany, satria io no manarina ny tsy fahampian-drano ao amin’ny hoditra
· Ny tantely dia sady antibiôtika no manakatona ny mason-koditra ihany koa. Miaro sahady amin’ny mety ho fipoiran’ny kentrona ihany koa izy.
· Ny voasarimakirana dia manala ny sela maty sady mampamiratra ny tarehy. Manamaina ny mony izy no sady manafaingana ny fahasitranany. Tsy tia masoandro mihitsy ny voasarimakirana rehefa apetaka amin’ny hoditra, ka fadio ny mitanina andro rehefa manao ity maska ity.